पुर्व एमाले र माओवादी केन्द्रलाई गम्भिर सुझाब- कृपया नेकपा नाम फेर्नोस् ?
यही जेठ ३ मा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेपालका दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरेर इतिहास निर्माण गरे। तर जनतालाई फेरि पनि आफूहरू ‘कम्युनिस्ट’ हौं भनेर ढाँटे र नयाँ दलको नाम नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राखिदिए। अघिल्लो महिना वैशाखमा कार्ल मार्क्सको द्विशतवार्षिकीका अवसरमा देशका अधिकांश कम्युनिस्ट भनिने नेताहरूले मार्क्सको सपनालाई आफ्ना विगतका आचरण र क्रियाकलापबाट पुष्टि गरेर होइन, मिठामिठा शब्दमा बेचेर धेरै ताली खाए। उनीहरूले मार्क्सवादी दर्शनप्रति रुची हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आउँदो एक वर्ष्भित्रमा १० हजार युवालाई मार्क्सवाद पढाउने उद्घोष पनि गरे।
(ग) साम्यवाद वर्ग्विहीन र राज्यविहीन हुन्छ, लोकतन्त्र वर्गीय र राज्ययुक्त हुन्छ। आफ्नो क्षमताअनुरूपको योगदान र नाफाको आवश्यकताअनुरूपको वितरणबाट वर्ग्विहीन समाज निर्माण नै साम्यवादको मर्म हो। जब समुदायले हरेक नागरिकको हितमा काम गर्छ, राज्यको आवश्यकता नै पर्दैन भन्ने मान्यता साम्यवादले राख्छ। तर आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने हाम्रा धेरै नेताले वर्गीय समाजको प्रमुख कारक निजी शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा कुनै आत्मग्लानि अनुभव नगरी लगानी गरेका छन्। तिनले डा. गोविन्द केसीजस्ता सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणबाट साम्यवादी सोच भएका होनाहारका व्यक्तिविरुद्ध विष वमन गरेका छन्।
तर उनीहरूका लागि साम्यवाद यति शानदार खोल हो जसले स्वार्थ, सत्तालिप्सा, भ्रष्टता र लोकमानप्रकरणदेखि गोविन्द केसीविरुद्धका उनीहरूका कर्तुतलाई सुन्दर ढंगबाट छोपिदिन्छ। परिणामतः साम्यवादको खोल ओड्ने नेताहरू सदा ‘सुखी’ र साम्यवादको दर्शनमा जानी–नजानी विश्वास गर्ने मतदाताहरू सदा ‘दुःखी’ बनिरहे। अब सत्ययुगीन स्वेरकल्पनामा आधारित साम्यवादको भ्रमबाट यो समाजलाई निकाल्नैपर्छ। भ्रम यस अर्थमा कि, जसरी सत्ययुगको अवधारणा आफैंमा महान् छ, त्यसैगरी साम्यवादको सोच आफैंमा महान त छ। तर सबै महान सोच व्यवहारमा लागू हुनसक्ने भए, गीता, बाइबल, कुरान र त्रिपिटकका सोचहरूले यो संसारलाई धेरै सुन्दर र सुसंस्कृत बनाइसक्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन। विशुद्धतावादी सबै आदर्श यथार्थको धरातलमा लागू हुन सक्दैन। आदर्श र यथार्थका बीच जहिले पनि आदर्श–निर्दे्शित सन्तुलनको आवश्यकता पर्छ। अति आदर्श र अति यथार्थ दुवै घातक हुन्छ। साम्यवादका सुन्दर पक्षहरूबाट यो संसारले धेरै सिकेको छ, साम्यवादका बारेमा संसारभर पढाइ भई नै रहनुपर्छ र त्यसबाट पुस्तौंपुस्ताले सिकी नै रहनुपर्छ। तर ती सिकाइहरू विश्वका महान धर्मग्रन्थबाट लिइने ज्ञानजस्तै हुनेछन्, जसका केही पक्षहरू अंगीकार गरिन सक्छन् तर समग्रमा ती आदर्श व्यावहारिक हुने छैनन्। साम्यवादको सपना बाँड्दै दसकौंदेखि गरिँदै आएको झूठको खेतीलाई अब अन्त्य नगरी भएको छैन। तर जबसम्म नेपालका पूर्णतः गैर–कम्युनिस्ट चरित्र बोकेका पार्टीहरूले आफ्नो नाममा ‘कम्युनिस्ट’ शब्द राखिरहन्छन्। नेपाली समाज ‘कम्युनिज्म’ को खोलबाट बाहिर निस्कन सक्दैन।
प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार